फेसबुक विज्ञापन दर्शकहरु सुधारित ROI - Semalt प्रम्प्टको लागि निर्मित
II। कसरी फेसबुक विज्ञापनहरू सिर्जना गर्ने जुन विशाल आरओआई उत्पन्न गर्दछ
III कसरी फेसबुक विज्ञापन तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ?
आजको संसारमा, कसैको व्यवसायको लागी एक्सपोजर र बिक्री उत्पन्न गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, तर सबैभन्दा प्रभावकारी तरीकामध्ये एउटा एक उत्तम फेसबुक विज्ञापन अभियान सिर्जना गर्नु हो। राम्रो विज्ञापनहरू राख्नको लागि सबै भन्दा राम्रो ठाउँहरू जान्नु आवश्यक छ र एक राम्रो आरओआई (लगानीमा फिर्ताको लागि) प्रति दिन विज्ञापनमा कति समय खर्च गर्नुपर्दछ भनेर जान्नु आवश्यक छ।
फेसबुक एक लाखौं उपयोगकर्ताहरु संग एक सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो जुन तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरु हुन सक्छ। त्यसोभए, विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्न यो उत्तम ठाउँ हो। र हो, फेसबुक विज्ञापन अधिक लागत छैन। त्यसोभए, यदि तपाइँ तपाइँको विज्ञापन अभियान सही तरीकाको बारे मा जानुहुन्छ, तपाइँ अत्यधिक मात्रा खर्च बिना नै महान ROI बनाउनु हुन्छ। फेसबुक विज्ञापन महान हो किनकी तिनीहरू यति सरल र प्रयोग गर्न सजिलो छ। कोडिंग वा सुरु गर्नका लागि प्राविधिक केहि पनि थाहा पाउनु हुँदैन, तिनीहरूलाई शुरुआतीहरूको लागि आदर्श बनाउँदै।
तपाईं वास्तविक समयमै तपाईंको आरओआई ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको पैसा कहाँ जाँदैछ र यसले तपाईंको आम्दानी कमाइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्न अनुमति दिदै। फेसबुक विज्ञापन को बारे मा एक महान चीज यो हो कि तपाईं विभिन्न अभियानहरू परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ कि केहि व्यवस्थित गर्नु अघि जुन तपाईंलाई उत्तम परिणाम दिन्छ। त्यसोभए तपाईं कसरी आफ्नो फेसबुक मार्केटिंग अभियानको सर्वश्रेष्ठ प्रयोग गर्नुहुन्छ? थप जान्नको लागि पढ्नुहोस्।
II। गुगल विज्ञापन अभियानमा ११ आम गलतियां
१. पीपीसी अभियानहरूलाई ठिकसँग लक्षित नगरेको
धेरै कम्पनीहरूले उनीहरूको पीपीसी अभियानहरू राम्रोसँग लक्षित गर्नमा गल्ती गर्दछन्। यो हो कि तिनीहरूले अभियानहरू कसरी लक्षित गर्ने भनेर बुझ्नको लागि समय लिएनन् वा तिनीहरूलाई यो कसरी जाने भनेर थाहा छैन।
त्यस्ता व्यक्तिहरू प्राय: पीपीसी अभियानको रूपान्तरण ट्र्याकिंग प्रणालीमा भरोसा राख्छन्, जुन अविश्वसनीय छ। ट्र्याकि systems प्रणालीले निर्धारित गर्न सक्दैन कि ती विज्ञापनहरू ती व्यक्तिहरूमा प्रदर्शित हुन्छन् जुन तिनीहरूको जनसांख्यिकीय आधारमा विज्ञापनहरूबाट फाइदा लिन्छन्। तिनीहरू रूपान्तरण दरहरू निर्धारण गर्न असमर्थ छन्, जुन व्यक्तिको संख्या हो जसले विज्ञापनमा क्लिक गर्छन् तर खास समय सीमा भित्र खरीद गर्दैन।
२. तपाईका कुञ्जी शब्दहरूलाई अप्टिमाइज नगर्ने
वेब पृष्ठ विज्ञापनहरू सिर्जना गर्दा, धेरै व्यक्तिले उनीहरूको विज्ञापन प्रतिलिपिमा कुञ्जी शब्दहरूको एक विस्तृत विविधता राख्छन्। यो गर्नाले स्मार्ट विकल्पको रूपमा लिइन्छ किनभने यसले तपाईंको विज्ञापनको लक्षित सम्भावितताहरूमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना बढाउँदछ।
जे होस्, त्यसो गर्नाले तपाइँको विज्ञापन बिक्रि नगरीकनै क्लिक हुन सक्छ। केहि अरूले विज्ञापनहरू पनि बनाउँदछ जुन केवल केहि प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू सम्मिलित गर्दछ। यसले अक्सर उच्च क्लिक-थ्रू-दरहरूमा डोर्‍याउँछ। जे होस्, यसले विज्ञापनको दृश्यता सीमित गर्दछ किनकि यो केहि खोजशब्दहरूको लागि मात्र श्रेणीगत छ।
तपाईं कम वा उच्च कुञ्जी शब्दहरूको लागि आफ्नो अभियानहरू अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईंको कुञ्जी शब्दहरू तपाईंको साइटको सामग्रीसँग प्रासंगिक छैनन् भने, तपाईंले सम्भवतः आफ्नो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, तैपनि तपाईं पैसा खर्च गर्नुहुन्छ।
तपाईको गुगल AdWords अभियानहरूका लागि खोज्ने कुञ्जी शब्दहरू तपाईंको व्यवसाय र वेबसाईटमा सान्दर्भिक हुनुपर्दछ। तिनीहरू पनि उच्च प्रतिस्पर्धी हुनु पर्छ। तपाईंको AdWords अभियानहरूको लागि उत्तम कुञ्जी शब्द छनौट गर्न Google AdWords कीवर्ड चयनकर्ता र Google AdWords Positioner जस्ता AdWords उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
जे होस्, त्यसो गर्नाले तपाइँको विज्ञापन बिक्रि नगरीकनै क्लिक हुन सक्छ। केहि अरूले विज्ञापनहरू पनि बनाउँदछ जुन केवल केहि प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू सम्मिलित गर्दछ। यो प्राय: उच्च क्लिक-थोरै-दरहरूमा जान्छ। यद्यपि यसले विज्ञापनको दृश्यता सीमित गर्न सक्दछ किनकि यो केवल केहि खोजशब्दहरूको लागि वर्गीकृत छ।
Low. कम गुणस्तर वा खराब ए poor्कर पाठ प्रयोग गरेर
केहि व्यक्तिले तिनीहरूको विज्ञापनको लागि गरीब एch्कर पाठहरू प्रयोग गर्दछ, जसले तिनीहरूलाई थोरै वा कुनै क्लिकहरू आर्जन गर्दैन। तपाईंले यसलाई दुबै उच्च-गुणको एch्कर पाठ र राम्रो कुञ्जी लक्षित अभियान प्रयोग गरेर बेवास्ता गर्नुपर्नेछ, त्यसैले तपाईंको विज्ञापनहरू उच्च क्लिक-पारहरू र त्यस पछि बिक्रीको लागि राम्ररी राखिनेछ।
एन्कर पाठ विज्ञापनहरू प्रयोग गर्नु तपाईंको पीपीसी अभियानको लागि धेरै फाइदाजनक हुन सक्छ यदि तपाईं यसलाई राम्रोसँग निर्माण र चलाउनुभयो भने। यो काम गर्नको लागि तपाईसँग एक कडा विज्ञापन समूह हुनुपर्दछ। समूहमा ट्राफिकको सही मात्रा उत्पन्न गर्न प्रासंगिक कुञ्जी शव्दहरू समावेश गर्नुपर्दछ।
Negative. नकारात्मक सर्तहरूमा बिडिंग
नकारात्मक शब्दहरूमा उच्च क्लिक-थ्रु-रेटहरू हुन्छन्, तर ती हानिकारक पनि हुन सक्दछन्। यदि तपाईं नकारात्मक सर्तमा बोलपत्र गर्नुहुन्छ भने पनि, तपाईंले यसलाई सीमित गर्नुपर्दछ। मानिसहरुको गुगल एड्वर्ड्स अभियान लेख्दा बनाउने सबैभन्दा ठूलो गल्ति मध्ये एक नकारात्मक कुञ्जी शब्दहरु प्रयोग गरिरहेको छ। नकारात्मक कुञ्जी शव्दहरू, जस्तै "किन्न तयार छैन," "यो उत्पादन सिफारिस गरिएको छैन," वा "शपिंग कार्ट उपलब्ध छैन," लाई प्रभावकारी AdWord अभियानमा कुनै ठाउँ छैन।
यदि तपाईं नकारात्मक कुञ्जी शब्दहरूमा बिड लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईं गुगल एडवर्ड्स अभियानहरूमा धेरै पैसा गुमाउन सक्नुहुनेछ। नकारात्मक कुञ्जी शब्दहरूले गुगललाई तपाईंको विज्ञापनहरू गुगलको विज्ञापन नेटवर्कमा प्रतिबन्ध गर्न लगाउँदछ। जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको कुञ्जी शब्दहरूको लागि उच्च मूल्य पाउनु भएको छ, तपाइँ तपाइँको समग्र विज्ञापन शक्ति चलाउँदै हुनुहुन्छ।
The. गलत दर्शकहरूलाई लक्षित गर्दै
राम्रो विज्ञापन अभियानमा अर्को साधारण गल्ती व्यक्तिहरू गलत दर्शकहरूलाई लक्षित गरिरहेका छन्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं किशोर किशोरीहरुको उत्पादनहरु को बारे मा एक विज्ञापन छ, तपाईं मात्र किशोर लक्ष्य गर्नु हुँदैन। तपाईंको विज्ञापनले उनीहरूको अभिभावक र अभिभावकहरूलाई पनि समात्न सक्दछ। यसको मतलव तपाईले साना केटाकेटीलाई मात्र लक्षित गर्नुहुने छैन, तपाई वृद्ध उमेर समूहलाई पनि लक्षित गर्नुहुनेछ।
तपाईंले उनीहरूको लागि विज्ञापन लेख्नु अघि उनीहरूको आदर्श ग्राहकहरू निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यदि तपाइँ तपाइँको वेबसाइटहरु मा तपाइँको पाठकहरु लक्षित छैन, तपाइँले चाहनुभएको ट्राफिक प्राप्त छैन। तपाईंको कुञ्जी शब्द-धनी विज्ञापनहरू तपाईंको आदर्श ग्राहकहरूको प्रोफाइलमा आधारित लेख्नुहोस्, र गुगलले तपाईंलाई ती फेला पार्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको श्रोताको लागि तपाईंको विज्ञापनहरू अनुकूलन गर्न, तपाईंले तपाईंको दर्शकको विशेषताहरू जान्नु आवश्यक छ। उनीहरूले कुन खोजशब्दहरू खोजे, कस्तो प्रकारका विज्ञापनदाताहरू, इत्यादि। आमा-बुबाको लागि राम्रो अनुकूलित तर किशोरहरूको लागि होईन भन्ने विज्ञापनले रूपान्तरण गर्ने छैन।
A. नराम्रो अवतरण पृष्ठ रहेको
व्यक्ति साइट अपिलिंग लाग्दैन वा अवतरण पृष्ठबाट स्प्यामी देखिन्छ। यी दिनहरू मार्केटिंगले कार्य गर्दछ। त्यसोभए, तपाईंको साइट अप्टिमाइज गर्नुहोस् र तपाईंको विज्ञापन क्लिकबाट तपाईंको अवतरण पृष्ठमा आगमन आगन्तुकहरूको लागि पर्याप्त अपील गर्नुहोस्।
तपाईंको विज्ञापनहरू तपाईंको वेब पृष्ठ सामग्रीमा पनि प्रासंगिक हुनु आवश्यक छ। यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू तपाईंको वेबसाइटमा प्रदान गरिएको जानकारीसँग नजिकको सम्बन्धमा हुनु आवश्यक छ। यदि तपाईंले यी गर्नुभएन भने, तपाईंले विज्ञापनहरू उत्पादन गर्नुभयो जुन तपाईं चाहानु भएको ग्राहकहरूलाई ल्याउनमा सफल हुँदैन।
Keywords. किवर्डमा हिज्जे गल्तीहरू
माथिको साथसाथै तपाई कुञ्जी शब्दहरूमा हिज्जे गल्तीहरू पनि हटाउन चाहानुहुन्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ "स्लिम चिया" कीवर्ड को लागी पिन गर्दै हुनुहुन्छ, कि तपाईले "सिम चिया" वा "जिम चिया" लाई होइन तर लेख्नु पर्छ। बहु अक्षरहरूका शब्दहरूमा पनि तपाईले टाइप गरिरहनु भएको कुरामा ध्यान दिनुहोस्। उदाहरण को लागी, "चलिरहेको जुत्ता" फरक "चलिरहेको जुत्ता" हो।
Multiple. बहु विज्ञापन विविधताहरू सिर्जना नगर्दै
अर्को साधारण गल्ती मान्छेले बनाउँदछ जब गुगल विज्ञापनहरू राख्दछ उस्तै समग्र विज्ञापनको लागि तपाईंको गुगल एडवर्ड खातामा बहु विज्ञापन विविधताहरू सिर्जना गर्दैन। समान कुञ्जी शब्दहरूका लागि तपाईंले बिभिन्न विज्ञापनहरू सिर्जना गर्नु आवश्यक पर्दैन; रूपहरु को रूप मा तिनीहरुलाई लिंक गर्नुहोस्। तपाईंले बिभिन्न विज्ञापन अभियानहरू मात्र सिर्जना गर्नुपर्दछ जब तपाईंसँग बिल्कुल बिभिन्न किवर्डहरू, उत्पादनहरू, वा आलामा केन्द्रित हुन।
यदि तपाइँको लक्ष्य तपाइँको विज्ञापन को धेरै भन्दा धेरै विविधता सिर्जना गर्न को रूप मा संभव छ, तपाईं एक प्रभावशाली फरक बिना यति धेरै खर्च हुनेछ। तपाईंले आफ्नो सामग्रीको लागि छुट्टै अभियानहरू बनाउन आवश्यक पर्दैन यदि तिनीहरू समान ठाउँमा आउँछन्। यदि तपाईंसँग उही विज्ञापन वर्णनको लागि छुट्टै अभियानहरू छन् भने, तपाईंसँग रूपान्तरण गर्ने सम्भावना कम हुनेछ। त्यसोभए, पत्ता लगाउनुहोस् कि भिन्नताहरू सिर्जना गर्दा तपाईंको अभियानमा यो फिट हुनेछ र यसले काम गर्दछ।
Going। प्रत्यक्ष हुनु अघि तपाइँको विज्ञापनको परीक्षण गरीरहेको छैन
यो एक ठूलो गल्ती हो कि तपाईंको गुगल एड्वर्ड्स अभियानहरू बनाउँनुहोस् र तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष पठाईयो तिनीहरूलाई पहिले परीक्षण नगरी। तपाईंले आफ्ना अभियानहरू बिभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट लिनुपर्दछ कि निर्धारण गर्न सम्भावित क्षमता छ कि छैन भनेर। यो गर्न असफल हुनुको अर्थ एक विज्ञापन राख्नु हो जसमा रूपान्तरणको सम्भावना थोरै छ वा छैन, विशेष गरी यदि त्यहाँ बाहिर पठाइएको विज्ञापनमा केहि गलत भएको थियो। तपाइँको अभियानको प्रत्येक रूपान्तरण चरणको परीक्षण गर्नु पर्छ कुन विज्ञापन भिन्नताले तपाइँको दर्शकमा सब भन्दा बढी प्रभाव पार्छ भनेर निर्धारण गर्न।
१०. तपाईंको रूपान्तरण ट्र्याक गरीरहेको छैन
रूपान्तरण ट्र्याकिंग तपाईंलाई विज्ञापन प्लेसमेन्टको प्रभाव हेर्न मद्दत गर्दछ। रूपान्तरण ट्र्याकिंग बिना, तपाईं केवल अनुमान लगाउनु हुन्छ कि कुन विज्ञापनहरू रूपान्तरण गर्दैछ र तपाईंको विज्ञापनहरूले तपाईंको आगन्तुकहरूमा कस्तो प्रभाव पार्छ। रूपान्तरणले तपाईंलाई मूल्यवान जानकारी प्रदान गर्दछ कसरी राम्रो परिणामहरूको लागि तपाईंको विज्ञापनहरू अनुकूलित गर्न।
११. अन्य साधारण गल्तीहरू
व्यक्तिले बनाउने अन्य सामान्य गल्तीहरूमा तपाईंको अभियानको लागि उपयुक्त नहुने विज्ञापन समूह छनौट गर्दछ। मुख्य गल्ती सामान्यतया विज्ञापन समूहको छनौटमा हो जसमा तपाईं बोलउनुभयो। विज्ञापन प्रासंगिकता, विज्ञापन प्रतिलिपि र विज्ञापन प्लेसमेन्ट, विज्ञापन लागत, विज्ञापन तालिका, विज्ञापन गुणस्तर, वा विज्ञापन रैंकको महत्त्व बुझ्दैन।
केही व्यक्तिहरू कसरी डाटा कोलेट गर्न र तपाईंको कोठामा रहेको अन्य बिडहरूको बिरूद्ध तुलना गर्न जान्छन्। अन्तमा, यसले अत्यन्त महँगो CPC प्रयोग गर्न सक्दछ जुन लायक छैन वा तपाइँको विज्ञापन कसरी अप्टिमाइज गर्ने भनेर बुझ्दैन, जसले हामीलाई यस लेखको अर्को भागमा ल्याउँदछ।
III उच्च रूपान्तरणको लागि कसरी तपाईंको गुगल विज्ञापनहरू अनुकूलित गर्ने
रूपान्तरणहरू तपाईले कति कमाई गर्नुहुन्छ र तपाईंको विज्ञापनले प्राप्त गर्ने क्लिकको संख्या बीचको भिन्नता हो। जब एक सम्भावित खरीदार तपाइँको विज्ञापन मा क्लिक, तपाइँको प्रति रूपान्तरण लागत तपाईले प्राप्त गरेको यातायात को प्रकार द्वारा निर्धारण गर्दछ। यो डेमोग्राफिक्स र खरीददारको रुचिमा निर्भर गर्दछ। यदि तपाइँ प्रति क्लिक भुक्तान विज्ञापनहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तब रूपान्तरण ट्र्याक गर्ने एक मात्र तरिका तपाइँको साइटमा खुला फारामको साथ वा अनलाइन ट्र्याकि tool उपकरण प्रयोग गरेर हो। यहाँ छ कि उच्च रूपान्तरण को लागी तपाइँको विज्ञापनहरु लाई कसरी अनुकूलित गर्ने।
१. तपाईको कुञ्जी शब्दमा ध्यान दिनुहोस्
तपाईंले आफ्नो गुगल AdWords विज्ञापन समूहमा विज्ञापनको लागि रोज्नु भएको कुञ्जी शब्दहरूमा पनि तपाईंले ध्यान दिनुपर्नेछ। कुञ्जी शब्दहरू सम्भावित ग्राहकले खोजिरहेको कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। यदि तपाईं एक बीमा एजेन्ट हुनुहुन्छ भने, तपाईं बीमा नीति, गृह बीमा, वाहन बीमा, आदि जस्ता कुञ्जीशब्द अन्तर्गत विज्ञापन गर्नुहुनेछ। यदि तपाईं प्लम्बि services सेवाहरू बेच्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं खोजशब्द अन्तर्गत विज्ञापन गर्नुहुन्छ जस्तै प्लम्बिंग सेवाहरू, ड्रेन क्लीनिंग, ड्रेन मर्मत, आदि
तपाईंले आफ्नो मुख्य कुञ्जी वाक्यांश वा कीवर्ड वाक्यांशहरूको लागि अप्टिमाइज गर्नुपर्छ। जेनेरिक शब्दहरू वा मुख्य वाक्यांशहरू कहिले पनि तपाइँको मुख्य विज्ञापन पाठको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्। यसले तपाइँको खोज इञ्जिन स्थिति सीमित गर्दछ र तपाइँको विज्ञापन को हटाउने परिणाम पनि हुन सक्छ। तपाईंको सामग्री तपाइँको दर्शकहरूको लागि अद्वितीय र अनुकूलित हुनुपर्दछ र तपाइँको साइट भित्र र तपाइँको बिभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूमा उचित ठाउँमा राख्नु पर्छ।
२. उत्तम ग्राफिक्स प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको विज्ञापन प्रयोगकर्ताको ध्यान आकर्षित गर्न राम्रो ग्राफिक्स हुनु पर्छ। धेरै व्यक्तिहरू केवल विज्ञापनको पहिलो केहि सेकेन्डमा मात्र हेर्दछन्, र यदि उनीहरूले के खोज्दै छिटो फेला पारेनन् भने तिनीहरू टाढा जानेछन्। त्यसोभए तपाईंले उनीहरूको ध्यानाकर्षण लिनु पर्छ जुन तिनीहरू तपाईंको विज्ञापनमा हेरेका छन्। यो गर्नका लागि र use्गहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन तपाईंको वेब पृष्ठमा छिटो आँखा कोरिने छ। यो चमकदार र महँगो हुनुपर्दैन; केवल यसलाई माथि बराबर बनाउनुहोस्।
Ad. विज्ञापन समूह छनौट गर्दा प्रासंगिकतामा फोकस गर्नुहोस्
तपाईंको गुगल AdWords विज्ञापन समूह अनुकूलन गर्दा तपाईंले प्रासंगिकतामा विचार गर्न आवश्यक छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको विज्ञापनहरू विज्ञापन समूहहरूमा मिल्दछ जहाँ तपाईं तिनीहरूलाई राख्नुहुन्छ। तिनीहरू ती समूहहरूसँग प्रासंगिक हुनु आवश्यक छ; अन्यथा, तपाईंसँग कम रूपान्तरण हुनेछ। साथै, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन समूहमा सबै प्रासंगिक शब्दहरू छन् जुन तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले खोजी गर्ने छन्।
Ads. तपाईंलाई आवश्यक विज्ञापनहरूको प्रकार बुझ्नुहोस्
त्यहाँ बिभिन्न प्रकारका विज्ञापनहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो उत्पादनहरूलाई अनलाइन बढावा दिन सक्नुहुन्छ। तपाइँ प्रति क्लिक अभियान भुक्तान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं वर्गीकृत विज्ञापन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियो विज्ञापनहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ तपाइँको विज्ञापन याद गर्न चाहानुहुन्छ, तपाई यी सबै चीजहरु गर्न चाहानुहुन्छ।
Search. खोज ईन्जिनका लागि तपाईंको विज्ञापनहरू अनुकूलन गर्नुहोस्
यदि तपाइँ तपाइँको विज्ञापन बाँकीबाट अलग देखिन्छ र क्लिकहरु को धेरै प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईलाइ खोज इन्जिनका लागि अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दछ। एक गतिशील विज्ञापन समूह कसरी बनाउने सिक्नुहोस् जुन दरहरू मार्फत उच्च क्लिक हुन्छ। तपाईं कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन समूह प्रयोगकर्ताले गरेको खोजीसँग प्रासंगिक छ। प्रत्येक व्यक्तिगत विज्ञापन समूहमा एक विवरण जोड्नुहोस्। त्यसो भए प्रत्येकको लागि एक रमाईलो हेडलाईन लेख्नुहोस्।
S. यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको विज्ञापन कपी समुहसंग सम्बन्धित छ
निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको विज्ञापन प्रतिलिपि प्रयोगकर्ता भित्र रहेको समूहसँग पनि प्रासंगिक छ। त्यो हो, हेडलाईनलाई तत्काल खोजीको ध्यान खिच्न आवश्यक छ त्यसैले तिनीहरू कहिँ पनी आफ्नो विज्ञापन समूहमा जान सक्दैन। विज्ञापनको शीर्षक र विज्ञापनको पहिलो वाक्य तपाईंको प्रस्तावमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि सम्भव छ भने, तपाइँको विज्ञापन भित्र एक कल-टु-एक्शन पनि थप्नुहोस् ताकि खोजीकर्ताले तपाइँको विज्ञापनहरू क्लिक गरेपछि आवश्यक कार्य लिनेछ।
यदि तपाईं कसरी आफ्नो गुगल विज्ञापनहरू उत्तम बनाउने बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले अनलाइन मार्केटिंगसँग सम्बन्धित कक्षा लिने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। तपाईले प्रभावकारी बिडिंग रणनीतिहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ, कुञ्जीशब्द, विज्ञापन समूह, र अधिकमा आधारित उच्च-गुणवत्ता विज्ञापनहरू सिर्जना गर्न। अनलाइन मार्केटिंग सम्बन्धित एक क्लास लिएर, तपाईं लाभदायक अभियानहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ जसले तपाईंलाई गुगल एड्वर्ड्स अभियानहरूमार्फत गरिएका सामान्य गल्तीहरूबाट बच्न मद्दत गर्दछ। Semalt यो पनि तपाइँ मार्फत राख्न सक्नुहुन्छ। वा अझ राम्रो, उनीहरूलाई उच्च रूपान्तरणको लागि विज्ञापनहरू अनुकूलित गर्नुहोस्।